सेमील्ट: Google Analytics बाट कसरी आन्तरिक ट्राफिक फिल्टर गर्ने सुझावहरू
के तपाइँ जान्नुभयो कि तपाईको आफ्नै भ्रमणहरू, सामान्यतया आन्तरिक ट्राफिकको रूपमा उल्लेखित Google Analytics तथ्याङ्कहरूमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ? तपाईंको अभियानको प्रारम्भिक चरणहरूमा, तपाइँका गतिविधिहरूले तपाइँका रिपोर्टहरू त्यस समयमा तपाईंको वेबसाइटलाई कम समयमै कम ट्राफिक प्राप्त गर्न प्रभाव पार्छ। आन्तरिक ट्राफिक न केवल गुगल एनालिटिक्समा रेकर्ड गरिएको भ्रमणहरूको असर गर्छ, तर तपाईंको साइट, उछाल दर, र अन्य महत्वपूर्ण परिमितिहरूमा आगन्तुकहरूले खर्च गरेको औसत समय पनि।
केहि उपकरणहरू तपाईंको दैनिक भ्रमणहरू र यातायातको आन्तरिक परिमितिहरू ट्रयाक गर्न को लागी अगाडी बढाएको छ। तथापि, प्रत्येक मेट्रिक विधि गुण र डेमीटाइटहरू समावेश छन्। Google Analyticsले मार्केटर्सहरूलाई आन्तरिक भ्रमणहरूद्वारा उत्पन्न यातायात ट्रयाक गर्न मद्दत गर्दछ। आन्तरिक र बाह्य ट्राफिकको सन्तुलन लामो समयसम्म प्रभावकारी अभियान हुन आवश्यक छ।
फ्रैंक निदान, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धक, तपाईंको तरिका को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका छ, र यसलाई कसरि लागू गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका को चयन गर्न को लागि मदद गर्ने तरिका को सूची प्रस्तुत गर्दछ।
Google Analytics फिटिंग सुविधा (1 9)
यो सामान्यतया प्रयोग गरिएका विशेषताहरू मध्ये एक हो जसले डोमेनहरू, पृष्ठ शीर्षकहरू, र आईपी ठेगानाहरू फिल्टर गर्न काम गर्दछ। स्रोत डोमेन र आईपी ठेगानालाई फिल्टर गर्दै तपाईंको रिपोर्टहरू र तथ्याङ्कहरू प्रभावित गर्नबाट तपाईंको आन्तरिक भ्रमणहरू प्रतिबन्धित आदर्श छनोटको रूपमा मानिन्छ। फिल्टरिंग फीचरले अनुमति दिन्छ सामग्री मार्केटर र वेबसाइट मालिकहरू आन्तरिक वातावरणसँग सम्बन्धित सबै सुविधाहरू हटाउन।
विशेषज्ञहरु को अनुसार, Google एनालिटिक्स फिल्टरिंग उपकरण ट्रोजन वायरस र मैलवेयर को नकली यातायात उत्पन्न देखि ब्लक गर्दछ। Source .
फ्याक्चरिंग फीचर को उपयोग को लाभ र नोकसान (1 9)
Google एनालिटिक्स फिल्टरिंग उपकरणले बजारहरूलाई वेबसाइट अपरेशनको पूर्ण नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, उपकरणले लचीला र विश्वसनीय समाधान प्रदान गर्दछ। अर्कोतिर, Google फिल्टरिंग उपकरण साना संगठनों र कम्पनीहरु को लागि सिफारिश छैन।
यो सहायक उपकरणले आन्तरिक र बाह्य ट्राफिकलाई भिन्न बनाउँछ। लामो समयसम्म, यसले तपाईंको रिपोर्ट नियन्त्रण गर्नबाट आन्तरिक ट्राफिक रोक्छ।
साना संगठनों को लागि सिफारिस गरिएको छ
लचीला र सरल समाधान प्रदान गर्दछ
ठूलो संगठनहरूको लागि उपयुक्त छैन।
धेरै महँगो महँगो खर्च गरीएको प्रोफेसर
द्वारा खर्च को लागी
सर्भर साइड विधि (1 9)
सामान्यतया ब्याकइन्ड विधिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, सर्भर साइड विधिले वेबसाईट मालिकहरूलाई आफ्नो सर्भर कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसो गर्दा, आन्तरिक ट्राफिक, मालवेयर, र ट्रोजन भाइरसको ट्रयाकिङ कोड तथ्याङ्कमा रेकर्ड गरीएको छ।
सबैभन्दा सुरक्षित र विश्वसनीय टेक्नोलोजीको रूपमा विचार गर्नुहोस्
मार्केटर्सहरूलाई गतिशील र निश्चित IP ठेगानाहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ
सबै प्रकारका ब्राउजरहरूको लागि सुविधाजनक
भ्रमण गरिएको पृष्ठको स्थिर संस्करणसँग क्याचिंग प्रणालीमा लगातार रिटर्नहरू प्रदान गर्दैन।
जब यो मार्केटिङ आउछ, उत्पन्न यातायात र प्रयोगकर्ताको सगाई बढाउन निकै महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, आन्तरिक वातावरणबाट उत्पन्न भएको ट्राफिकले एल्गोरिदममा प्रतिकूल रिपोर्ट र तथ्याङ्कलाई असर गर्छ। माथि उल्लेखित उपकरणहरू र प्रविधिहरूले तपाईंको गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टलाई प्रभाव पार्नबाट आन्तरिक ट्राफिक हटाउन र रोक्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंको अफिसबाट उत्पन्न यातायातलाई फिल्टर गर्न पछि, प्रभावहरू प्रभावकारी रूपमा प्रभावकारी रूपमा विचार गर्नुहोस्।